Madaxweynaha Xasan Sheekh oo gaaray Sacuudiga, kana qeyb galaya shir madaxeedka Carabta – idalenews.com
Madaxweynaha Xasan Sheekh oo gaaray Sacuudiga, kana qeyb galaya shir madaxeedka Carabta
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho todobaad qaadatay ku joogay dalka Mareykanka ayaa xalay gaaray magaalada Riyadh ee dalka Boqortooyada Sacuudiga Carabiga.
Madaxweynaha ayaa maanta lagu wadaa inuu ka qeyb galo shir madaxeedka Jaamacada Carabta oo looga hadli doono arrimaha dhaqaalaha carabta iyo maal gashiga.
Sida uu warbaahinta u sheegay Agaasimaha Madaxtooyada Kamal Dahir ka sokow ka qeyb galka shirka jaamacada Carabta waxaa uu Madaxweynaha uu si gaar gaar ah ula kulmi doona Madaxda dhowr ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin Madaxweynaha Masar, Boqorka Sacuudiga iyo madax kale.
Wafdi uu hogaaminayay Wasiirka Maaliyada Maxamuud Xasan Suleymaan iyo Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Faarah Sheekh C/qaadir ayaa horay ugu sugnaa Sacuudiga, kuwaasoo u gogol xaarayay booqashada Madaxweynaha.
Wasiirka Maaliyada Mr Suleymaan ayaa sheegay in arrimaha ugu weyn looga hadlayo ay ka mid tahay maal gashiga iyo dhaqaalaha, isagoo xusay in Soomaaliya looga hadli doono sidii maal gashi ku saabsan dhinacyada Tamarta, dhoofinta xoolaha iyo arrimo kale.
Xukuumada Soomaaliya oo bilaabeysa barnaamij cusub oo ku aadan dhismaha maamulada deegaanada
Puntland oo soo dhoweysay aqoonsigii Mareykanka uu siisay dowladda Soomaaliya